Umfuni we-Tweet: Thola Ukulandela Kwakho Okulandelayo | Martech Zone
I-TweetSeeker: Thola Ukulandela Kwakho Okulandelayo
NgoLwesine, ngoMashi 28, 2013 NgoMsombuluko, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Umngani omuhle nesitholi esikanye naye sethuluzi, uKevin Mullett muva nje ubeke isethulo esihle nge wabulala amathuluzi aku-inthanethi yokusesha kanye nemithombo yezokuxhumana. Empeleni ngidlula kuhlu ukuze ngiqiniseke ukuthi sethula amanye ala mathuluzi kufayela le- Martech Zone (ezinye zazo bezingezayizolo Uhlu lwamathuluzi we-SEO!).
TweetSeeker kuyindlela yokuphatha nokuhlela uhlu lwama-akhawunti we-Twitter ongathanda ukuwalandela. Ipulatifomu yesikhathi sangempela ikuvumela ukumaka noma imuphi umsebenzisi we-Twitter ngamagama noma amabinzana. Ungasebenzisa futhi amathegi angaphakathi ukufihla, ukulandela noma ukugqamisa nokubeka phambili ama-tweets womsebenzisi.
Isistimu ivumela ukuhlunga okuthuthukile futhi, kufaka phakathi ukusesha ngosuku, ngaphakathi kwe-akhawunti, ngaphakathi kwe-akhawunti yakho evikini eledlule, ngaphakathi kwabalandeli bakho, ngendawo, ngesilinganiso sabalandeli, ngomusho, ngesilinganiso sabo se-TPower, ngolimi noma ngezixhumanisi . Ungaphindaphinda kabili uhlu ngomsebenzisi noma ulikhiphe ngomusho futhi!
Tags: abalandeli be-curatehlunga i-twitterthola ama-akhawunti we-twitterabalandelihlela i-twittersesha i-tweeteramandlaukuzwusezingeni le-twitter
Izithako Ezingcono. I-Pizza Engcono. Isu Elingcono Lomphakathi.
Ungayihlanganisa Kanjani Isu Lakho Lokuqukethwe Nemikhankaso Yezokuxhumana Komphakathi